Indlela yokuziphatha uma uyiyinkosikazi
Kulesi sihloko sizokutshela indlela yokuziphatha ngendlela efanele uma uba yinkosikazi. Futhi amantombazane amaningi akhohlwe ngokuphelele ukuthi yimiphi imithetho okufanele ibe khona. Ake sikunike imithetho emayelana nendlela okufanele uziphatha ngayo.
1. Akufanele neze uthande abathandi bakho. Banobafazi, ngakho-ke mabathande. Ngakho, ngeke uhlupheke futhi ujabulele. 2. Inkosikazi kumele ifunde ukujabulela yonke ihora nomzuzu. Kumele uqonde ukuthi uyinjabulo kanye neholide empilweni yomuntu, futhi umfazi uyisimiso esihle. Unganaki ukuthi usuku nosuku lukhulu kuneholide, kodwa amaholidi akho ayona amahle kakhulu. Ngakho-ke, ungaxosha zonke izinhlobo zemicabango emibi.
Indlela yokuziphatha nomthandi
3. Yenza okuthile. Uma usumatasa kakhulu, lapho eqala ukukuhlonipha futhi emehlweni akhe, uzoba ophakeme. Futhi lapho eyokunikela ukuba uhlangabezane naye, mtshele ukuthi manje bheka edayari yakho uma unesikhathi samahhala esingahambisana nesikhathi sakhe.
4. Ungadangali uma wonke amaholide omphakathi, uhlala emndenini womndeni. Akufanele abe ngawe, oyedwa kuphela futhi ude ekukhanyeni efasiteleni lakho. Sebenzisa imali yakho ngamaholide nabangani bakho, bebengakwazi ukunyamalala uma unomthandi. Phela, bekuhlale kumnandi ukuchitha amaholide nabangani bakho. Yebo, uma usufuna ngempela ukuchitha amaholidi kanye nomthandi wakho, usuke usuvele uthandane. Futhi iseluleko sethu ngeke sikusize.
5. Yiba ngumvelo. Ungalaleli iseluleko kunoma imuphi umagazini okufanele uhlale ulungele ukufika kwakhe, upende futhi uhlolwe, ungalaleli lawa macebiso. Ukubone izikhathi eziningi ngaphandle kokwenza futhi uhamba kusuka eshaweni. Uza kuwe futhi kuye akunandaba ukuthi upende noma cha. Wakubona ngaphandle kokwenza futhi akazange amthumele. Ngakho phumula, kodwa ungakhohlwa, ukuthi, ubuke ubuhle bakho. Uma ungalondolozi ubuhle, angakushiya.
6. Ungabi umpheki. Uma ufuna ukumjabulisa futhi ulungiselele okuthile kuye, ungavumeli lokhu kube umkhuba kuwe. Kungcono ukuya ku-cafe bese uthola isidlo lapho. Uma unquma ukumpheka, yenza into engakaze idle. Masiqonde ukuthi angadla okunandi okumnandi, kuphela ukuba nawe.
7. Kufanele wazi ukuthi ungokoqobo nje kuphela, kodwa hhayi njengendlela yokwaneliseka.
Manje ungafunda ukuthi uziphathe kanjani uma unkosikazi.
Elena Romanova , ikakhulukazi indawo
Ungaqala kanjani ukuhlala ndawonye
Ukuphila okujabulisayo emshadweni nomthandekayo wakho
Yimaphi amagama abuyisela umfana?
Izicelo zabathandekayo noma indlela yokuthola isigamu sesibili?
Uthando lungenzeka yini umahluko phakathi kweminyaka
Ukuhlangabezana kanjani nothando langempela?
Indlela yokuhlangabezana nomnyaka omusha munye
Ungaba kanjani ukudala?
Indlela yokwenza izinyathelo zokwelapha izinyawo nezinyawo: inqubo, ividiyo
Inhlanzi nge izaqathe
I-toasts engcono kakhulu yomshado ngamazwi akho nakwevesi
Yiba lula: Yenza Up Ever Ever Aqua XL Makeup Collection
Ingane igaya amazinyo ephusheni, yisiphi isizathu
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-vesuviana
Izindaba Ezincane Ngomlingani Wothando
Senza amabhukumaka wezincwadi ezivela ephepheni ngezandla zethu
Amaphupho mayelana nendandatho yegolide: incazelo
Ukuphila nempilo yomculi weNkazimulo engozini
UHarry Potter ugule ukufa
Indlela yokwenza i-eye makeup yesokudla?
Ukufundisa izingane ulimi lwangaphandle emindenini phesheya
Indlela yokukhetha isitayela sokugqoka okwenziwe